September 29, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 3
MUQDISHO(P-TIMES) – Lix kursi oo kamid ah Kuraasta golaha Aqalka Sare DFS ee kasoo jeeda Somaliland ayaa maanta ka mid noqday xubnaha kamid noqonaya baarlamaanka 11aad ee dalka, kuraasta si weyn ayaa loogu loolamay, ka sokow shaqsiyaadka magacyadooda la naadinayay waxaa ku hoos duuganaa musharaxiin iyo kooxo kala duwan oo gadaal ka riixayay.
Kuraastan, xalay waxay noqotay kuraastii ugu lacagta badnayd oo ay gacantooda ka bixiyaan musharaxiintu, balse laga soo waariday jeebab kale, Celcelis ahaan durba lacagta lagu bixiyey loolankii xalay ee gashay gacanta Ergada wax dooranaysay waxaa lagu qiyaasayaa wax ka badan 1Malyan & 200 oo Dollar.
Sadex Kursi, ayaana lahaa xiisaha gaarka ah marka laga tago kuwa kale oo sooryeyn la mariyey, Cabdi Xaashi oo 4 sanno soo ahaa Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya ma marin wax tartan ah, si gacantaag ah ayuuna kusoo baxay, In uu soo baxanaa waxay ka dhigan tahay sii wadida dagaalka Farmaajo.
Kursiga Cabdi Ismaaciil Samatar kusoo baxay wuxuu ahaa midka koowaad ee ugu qaalisan lacag bixinta, Profka oo horey Farmaajo ugu eedeeyey 2017-kii in uu kusoo baxay Laaluush iyo codad gadasho, hadda Senatornimo ayuu ku helay lacag uu baxshay isna, inta aan xaqiijinay $4,500 Dollar ayuu baxshay.
Prof Samatar soo bixidiisu waa daqar siyaasadeed ku dhacay Farmaajo oo loolan adag xalay xili dambe galiyey Prof, Alla-Bari , sidaas oo kale imaanshihiisa Aqalka Sare ayaa labo kursiba Natiijada saameyn ku yeelan doona, Kursiga Aqalka Hoose ee Cabdiraxmaan Beyle ayuu tarar dilaac-weyn isku bedeli kara kusameeyey, sidaas oo kale Kursiga Aqalka Senata-ka ee berri la dooran doono kuna tartamayaan Deka & Hodan, ayuu natiijada Deeqa sara-mariyey, taas oo haddii Deeqo soo baxda ka dhignaan doonta dharbaaxo ay N&N ku ilaawi karto imaanshaha Cabdi Samatar.
Cabdi Ismaaciil Samatar, codkiisa doorashada Madaxweyne-nimada waxaa tirsanaya Teamamka labo Musharax Madaxweyne ee Xassan Sheekh & Hassan Ali Kheyre, oo labadaba la xaqiijinayo in ay dhaqaale ku bixiyeen.
Saalax Jaamac & Ibraahim Iidle, wuxuu ahaa kursiga 2aad ee dhaqaalaha ugu badan lagu baxshay, daraf kale wuxuu ahaa tartan culus oo xagga siyaasadda ah, waana aag ay ku loolameen Xassan Sheekh & Max’ed Farmaajo, Saalax wuxuu saaxiib dhaw la yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Lataliyaha Amniga Qaranka, dhinac kale wasiir aan dhicin ayuu soo ahaa 4 sanno & 6 bilood.
Senatornimadiisa maanta ayaa ka dhigan guul siyaasadeed oo isaga iyo saaxiibadiisa ay ku dabaal-dagayaan, hayeeshee loolanka ugu adag ee sugaya hadda waa arrinta gudoomiye-nimada Aqalka Sare iyo sida uu uwajahayo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo hadda isagu markale sharaxan.
In Ibraahim Iidle laga guuleysto ayaa Xassan Sheekh & Saaxiibadiisa uga dhegan dhabarjab siyaasadeed, oo aan waxba ka sokeynin kii Abshir Bukhaari ku waayay senatornimada, khasaaraha dhaqaale iyo waayida codka ayaana saameyn culus reebi doonta.
Kursiga, Cabdikariim Maxamed Xasan oo horey Senator u ahaa & Cismaan Abokor Dube oo ah wasiirka Warfaafinta ee hadda ayaa aha loolanka kale, oo sidii lafilayay ka hoosmaray, dhaqaale ahaan kursiga 3aad ee lagu tartamay ayuu ahaa, Dube ayaa la kulmayay dagaal adag oo uga imaanayay Saaxiibadiisa Villa Soomaaliya, dagaal kasoo bilowday Farmaajo & Rooble oo warbaahinta dawladdu soo kala dhaweysatay, Ugu dambeyn Dube ayaa noqday Senator kamid noqonaya baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya.
Cabdikariim oo dadka yaqaana kusifeeyeen nin aan laysku haleyn karin ayaa labo dhinacba taageero dhaqaale ka helay Farmaajo & Xassan Sheekh, hayeeshee duufaan ayaa la dagtay.
Dube, ayaa la kulmay dagaal 2 garab ah, Farmaajo & Mahdi Guuleed ayaa labaduba xooga saaray in Dube la dhaafiyo Senatornimo si uusan iskugu soo sharaxin Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Doorashada maanta ka dhacdey Afisyooni waxay si cad uga tarjumeysey in iidoor uu ka mid yahay qabiilada Soomaalisiya oo wax sadbursi ah uusan ku helikarin waa go’aynaa iyo in Soomaaliya labo lookala qabsado Confederation.
Waa qabiil yar oo ka mid ah qabiilada Soomaaliya oo weliba one point aanan aheen laakiinse one point noqonayaa marka lagu daro dirta Koonfur, Samaroon iyo Ciise.. Waxaa latusey tabartooda waxa ay tahay..
Isaaq wa dad furfuran waxayna leeyihiin mabda, waxayna la noolaan karaan dad walba , miyaad ilowday taas.
Walee inaad dameer bilaa caqliya tahay adiga iyo kula midka ah horeba waa loo ogaa,,
Bal ninka ceelgaab laga soo qabtay ama Xamar dhex wareegaya iyo laaluushka xadhkaha goostey ee bilaa xishooodka ah bal cida uu wax tarayo iskadaa somaliland ay sheeganayaane xamartaa Kudaafada ama qashin qubka noqotay wax maku soo kordhin karaan?????
wax cusub may soo kordhin waa isla kuwii ceelgaabta tubnaa cid ay metelaan iyo cid ay wax kusoo kordhin karaan ma jirto,,
Kuwii ka hireeyey markay xoogaa kasoo urursadeen dalkoodii somaliland ayay kusoo noqdaan iyagoo cafis soo weydiistay,,
Maangaabyahow qashinka ah,
Hadii tuuga xildhibaan ku sheega sheeganaya uu Tuulada Gadhoowe tagi karo laaluush iyo boobna kusoo baxay waxaad ku sheegaysaa waa xildhibaan Madheedheen soo doortay wuuna tegi karaa tuuladiisa Gadhoowe oo lagu soo dhoodhoobay,,hadaba bal noo sheeg xilmadhibaha tuuga ah ee magaca somaliland ku qadhaabanaya kuna bariis cunaya waxa xildhibaanimadiisu kusoo kordhinayso Zoomalia ama koonfur mar hadaanu dadkii iyo dalkii uu sheeganayey Cag soo dhigi karin,,
Sow shinbirayo heesa maaha hees wanaagsa Heesa
Halka soo fadhiista,,
Waar somaliland marhorey waxaa ka gudubtay calooshiisa la cayaar 30 kii sano u danbeeyey Xamar waa ka soo qaylinayeen maxay somaliland yeeleen?? Waxba,,
Reer koobfureed wax maku soo kordhiyeen,, Maya,,
Caqli gaabnimada kala bax meesha YAA Nedel naxli iyo cuqdada kaa buuxda meel la fadhiiso qolna isku soo xidh baroor qabso ama mushxarad somaliland intaad god geleyso way jiraysaa ama Ooy ama isku Xaar Yaa Xayawaan,,